Tetiandro samaritana - Wikipedia
Ny tetiandro samaritana dia tetiandro ampiasain' ny vahoaka atao hoe Samaritana. Mampiasa ny Pentateoka (boky dimy voalohany ao amin' ny Baiboly) izy ireo, ary ny fivavahana arahiny dia manana ny mampiavaka azy amin' ny jodaisma, ka isan' izany ny tetiandro ampiasain' izy ireo izay tsy mitovy amin' ny tetiandro jiosy. Tetiandro manara-bolana sy masoandro ny tetiandro samaritana ka sahalahala amin' ny tetiandro hebreo izay ahitana taona manara-masoandro sy volana manara-bolana ary herinandro misy fito andro (izay manomboka amin' ny Alahady).
1 Ny volana
1.2 Isan' ny volana ao amin' ny taona
2 Ny andro
2.1 Ny fanisana andro
2.2 Ny Sabata
3 Ny taona
3.1 Ny fanisan-taona
3.2 Ny fety ao amin' ny taona
Ny tetiandro samaritana dia manomboka ny volana ifanandrifian' ny Volana amin' ny Masoandro, fa tsy amin' ny fotoana ahatsinanan' ny Volana, tsy tahaka ny tetiandro jiosy. Satria maharitra 29,53 andro ny tsingerim-pihodinan' ny Volana, ny tetiandro samaritana, tahaka ny tetiandro jiosy, dia mampifandimby volana misy 29 andro amin' ny volana misy 30 andro.
Tsy toy ny tetiandro jiosy ny tetiandro samaritana ka tsy manome anarana ireo volana ao amin' ny taona fa ny laharany fotsiny, izay manomboka amin' ny 1 ka miafara amin' ny 12 (na 13 arakaraka ny taona). Ny anaram-bolana jiosy mantsy dia avy amin' ny anaram-bolana asirô-babilôniana izay azon' izy ireo nandritra ny fahababoanna tany Babilôna izay nanomboka tamin' ny taonjato faha-6 tal. J.K. Ny Samaritana, izay tsy tratran' io fahababoana io, dia tsy nandray ny anaram-bolana asirô-babilôniana satria miorina amin' izay voasoratra ao amin' ny Pentateoka, izay manonona ny volana amin' ny laharany (volana voalohany, volana faharoa, volana fahatelo, sns) fa tsy manome anarana azy ireo.
Isan' ny volana ao amin' ny taonaHanova
Ny taona manara-bolana ahitana roa ambin' ny folo volana dia misy 354,35 andro (12 × 29,53 andro) izay manakaiky ny fihodinan' ny Tany amin' ny Masoandro. Latsaka 10,89 andro (365,25 – 354,36) isan-taona izany ny taona samaritana raha mitaha amin' ny tsingerim-pihodinan' ny Tany amin' ny Masoandro ka fenoina izany amin' ny maha manara-bolana sy masoandro ny tetiandro samaritana.
Ny vahaolana amin' izany dia ny famaritana ireo taona misy 12 na 13 volana, araka ny tsingerin' i Metôna. I Metôna dia Grika niaina tamin' ny taona 433 tal. J.K. izay nahatsikaritra fa io 29,53 andro io ao anatin' ny 19 taona dia mampisy elanelana fito volana katroka. Ny tetiandro samaritana, toy ny an' ny Jiosy, dia mitsinjara ireo volana fito ireo ao anatin' ny faharetan' ny tsingerin' i Metôna, ka mandahatra taona ahitana 12 na 13 volana.
Mandritra ny tsingerin' i Metôna dia maharitra 13 volana ny 7 taona isanisany. Ao amin' ny tetiandro hebreo, ireo taona ireo dia ny taona faha-3, faha-6, faha-8, fah-11, faha-14, faha-17 ary faha-19 ao amin' ilay tsingerina, ny taona sisa dia taona tsotra ahitana volana 12. Ao amin' ny tetiandro samaritana kosa dia tsy miseho amin' ny elanelam-potoana mitovy ny 7 taona fa raiketina amin' ny alalan' ny kajy miafina izay ataon' ireo mpitarika ny fivavahana samaritana. Araka ny lovantsofina samaritana dia i Adama no nampianarina an' io kajy io, izay atao hoe Ishban Kashta (midika hoe "tena kajy").
Ny fanisana androHanova
Toy ireo volana 12 koa ny andro ao amin' ny herinandro ka tsy manana anarana manokana fa tondroina fotsiny amin' ny laharany ka manomboka amin' ny andro voalohany, izay tsy inona fa ny andro Alahady, hatramin' ny andro fahafito, dia ny andro Asabotsy. Manomboka amin' ny filentehan' ny Masoandro ny andro tsirairay.
Ny Sabata dia mifanandrify amin' ny andro Asabotsy, ka mitovy amin' ny Sabata jiosy izany. Ao amin' ny tetiandro jiosy dia tsy afaka milatsaka amin' ny andro mialoha ny Sabata na ny andro manaraka ny Sabata ny fankalazana ny Yom Kippur na ny fankalazana ny Sukkot. Noho izany dia ampiana andro iray na maro ny volana Kislev mba hialana amin' izany. Ao amin' ny tetiandro samaritana kosa dia tsy misy ny fanovana fa azo ankalazaina iray andro na maromaro mialoha na manaraka ny Sabata ireo fety ireo.
Araka ny lovantsofina, ny tetiandro samaritana dia efa hatramin' ny nodian' ny vahoakan' i Israely tao amin' ny Tany Masina nefa ny tetiandro hebreo jiosy dia nanomboka tamin' ny "taona voalohan' ny famoronana" ka ny taona 3641 ao amin' ny tetiandro samaritana, ohatra, dia taona 5763 ao amin' ny tetiandro jiosy sady taona 2002-2003 ao amin' ny tetiandro sivily.
Ny fety ao amin' ny taonaHanova
Noho ny fomba fikajiana ny tetiandro samaritana noresahina etsy ambony dia indraindray miafanandrify ny fankalazana fety jiosy sy ny fankalazana fety samaritana mitovy anarana, nefa mety hisy elanelana andro vitsy koa izany, eny fa mety ho iray volana aza (amin' ny fotoana tsy itovizan' ny isan' ny volana ao amin' ny taona jiosy sy ny an' ny taona samaritana).
Maro ny fety jiosy tsy ankalazain' ny Samaritana, dia ireo fety tsy andidian' ny Pentateoka. Ny fety samaritana lehibe indrindra dia ny fetin' ny Paska. Tsy mitovy amin' ny Jiosy izay tsy manatanteraka intsony ny soron' ny zanakondrin' ny Paska ny Samaritana fa mbola manao izany iray andro mialoha ny Paska eo amin' ny tendrombohitra Gerizima.
Tsy ny Paska ihany anefa no fety ankalazain' ny Samaritana fa ao koa ny mpanao fivahiniana masina israelita-samaritana izay mitsidika intelo isan-taona ny toerana masina eo amin' ny tendrombohitra Gerizima. Ny andro fahafito amin' ny Paska, izay atao hoe "fetin' ny mofo tsy misy masirasira", fa tsy שבועות / Shavouot (izany hoe ny Pentekôsta) sy ny andro voalohany amin' ny fetin' ny tabernakely (Sukkot). Ireo fivahiniana masina telo ireo dia mifandray hentitra amin' ny fety telo lehibe jiosy, dia ireo Sheloshet Haregalim.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetiandro_samaritana&oldid=1037889"
Dernière modification le 15 Septambra 2021, à 11:06
Voaova farany tamin'ny 15 Septambra 2021 amin'ny 11:06 ity pejy ity.